Booliska oo su’aalo ku saabsan musuqmaasuq weydiiyay wasiirka ciyaaraha – The Voice of Northeastern Kenya
Booliska oo su’aalo ku saabsan musuqmaasuq weydiiyay wasiirka ciyaaraha
Laamaha dambi baarista ee Ciidamada booliska dlaka ayaa su’aalo weydiiyay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Hassan Wario iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda.
Masuuliyiintaan ayaa wax laga weydiiyay arrimo ku saabsan wax is daba marin lagu sameeyay hannaanka waaxda ciyaaraha ee dalka, xiligii ay socdeen ciyaarihii Olympicada aduunka ee sanadkaan ka dhacay waddanka Barazil.
Waxaa masuuliyiinta sar sare ee wasaaradda Isboortiga lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin lunsashada lacag dhan 88 million oo shilin oo loogu tala galay in lagu maareeyo ciyaartoyda Kenya ee ka qeyb galeysay tartamadaasi.
Xubno ka tirsan Waaxda dambi baarista dalka ee CID-da ayaa tagay xafiisyada ay ku shaqeeyaan madaxda wasaaradda ciyaaraha, halkaasoo ay cadeymo ka raadinayeen su’aalona ku weydiinayeen saraakisiha.
Saraakiisha kale ee shalay su’aalaha laga weydiiyay musuqmaasuqa ayaa waxaa ka mid ah agaasimaha dhinaca maamulka ee wasaaradda Ciyaaraha Mr Harun Komen iyo Mr Wesley Maritim oo ah madaxa shaqaalaha ee wasaaraddaasi.
Eedeymaha iyo baaritaannada ku qotoma wasaaradda Ciyaaraha ee uu hogaamiyo Dr Wario ayaa soo jiitamayay tan iyo markii lasoo gaba gabeeyay ciyaarahaasi Olympicada ee bishii August ka dhacay Barazil.
← Raila Odinga oo lagu booriyay in uu faraha kala baxo arrimaha siyaasadeed
Dowladda oo beenisay in isbadal lagu sameynayo waqtiga doorashada →